Oonleen ahaan – Waxaan kugu dhiirigalinaynaa inaad adeegsato Hanaankeena Isqorista Oonleenka ah. Waxaad ubaahanaysaa inaad samaysato ciwaan adoo adeegsanaaya magacaaga iyo ciwaanka iimeelka oo shaqaynaaya. Kadib markaad furato ciwaanka aadna dhamayso hanaanka isqorista oonleenka ah, qof ayaa kulasoo xariiraaya sida ugu dhakhsiyaha badan si uu macluumaad kuusiiyo ama jadwal kuugu sameeyo balantaada. Isqoristeena oonleenka ah waa mid furan markasta, laakiin qof ayaa intaas kadib kulasoo xariiraaya inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah (Isniinta-Jamcada, 8:00 am - 4:00 pm).
Khadka taleefanka – Haddii aad doonayso inaad qof toos ula hadasho, ama aad rabto in lagaa caawiyo buuxinta isqoristaada oonleenka ah, fadlan nagasoo wac laynkeena bilaashka ah oo ah 1-866-297-2597 inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah Isniinta-Jamcada, 8:00 am – 4:00 pm. Shaqaalaheena ayaa khadka taleefanka kuturjumi kara wax kabadan 150 luuqadood. Haddii aad dhibaato kuqabto laxariirista laynkeena bilaashka ah, waxaad sidoo kale wici kartaa 206-496-9368.